Raha ny fizotry ny raharaha tamin’ny ankampobeny, dia lehilahy iray avy ao an-toerana no nanambady vehivavy avy any Esira-Amboasary Atsimo. Nanapa-kevitra ny nampiaka-bady vehivavy hafa izy io, kanefa ny fombafomba amin’ny fisarahana tamin’ilay vadiny teo aloha tsy tontosa. Noho izany indrindra no nahatonga ny Dina Be izay jado na malaso niova fa avy any Esira fiavian’ilay vehivavy vadiny teo aloha. Ho sazin’ilay rangahy dia nisy ny fitakiana omby maro ho onitra tamin’ny tsy fanatanterahana ny fombafomba amin’ny fisaoram-bady. Nanda an’izany ny fianakavian-dRalehilahy, ka nandrahona ny handroaka ny omby teo an-tanàna ny an-kilany mpampihatra dina. Nanomboka teo ny disadisa sy gidragidra niafara tamin’ny vono olona. Lasibatra ireo mpampihatra ny dina avy any Esira, ka nahatonga an’io faty olona 11 be izao io. Ilaina ny Dina fa tokony hoeken’ny rehetra ary nandalo fankatoavana avy amin’ny ambaratongam-pahefana no ampiharina eny amin’ny fiarahamonina hialana amin’izay disadisa mety niseho, hoy ny Governoran’ny faritra Anôsy Hatefindrazana Jerry tao amin’ny tambajotran-tserasera manoloana ity toe-draharaha ity. Naneho fiondrehana am-panajana manoloana ireo aina nafoy ny tenany, ary nankahery sy mitondra fampiononanan iany koa ho an’ireo havany maty sy nanainga ny rehetra mba samy ho tony manoloana ny zava-nitranga ary manentana hatrany mba samy ho hentitra amin’ny fanarahan-dalàna. Hatreto dia mbola atahorana ny hisian’ny valifaty tsy ampoizina teo anatrehan’ity raharaha ity.